शाओमी POCO M3 विश्लेषण: सुविधाहरू, मूल्य र रायहरू | Androidsis
Xiaomi POCO M3 विश्लेषण: के यो यसको स्पेसिफिकेसनको साथ यसको लायक हो?
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 08/04/2021 18:00 | अद्यावधिक गरियो 11/04/2021 10:52 | समीक्षा
आज हामी तपाईलाई लिएर आउछौं धेरै विशेष समीक्षा र अत्यधिक प्रत्याशित पनि। हामी परीक्षण गर्न सक्षम हुन धेरै भाग्यशाली छौं शाओमी पोको एम 3। हामी सबैलाई जो आजको स्मार्टफोनको केहि ज्ञान छ हामीलाई बजारमा पोको फोन एफ १ को उदय याद छ.
लगभग कहिँबाट, एक अज्ञात उपकरणले सबैको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भयो। आज पनि F1 अझै पनि मध्य-दायरा स्मार्टफोनहरूको सिफारिशहरूको बीचमा रहेको छ प्रदर्शन र मूल्य बीच एक राम्रो सन्तुलन प्रदान गर्दछ। तर पोको परिवारका नयाँ सदस्यहरू आइपुगेका छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक को लागी बनाउने, र यहाँ Poco M3 उत्तम फिट।
1 POCO, जटिल बिना फर्म
2 पोको M3 अनबक्स गर्दै
3 यो पोको M3 हो
4 पोको M3 स्क्रीन
5 पोको एम inside भित्र के छ?
6 पोको एम's को क्यामेरा
7 M3 को साथ खिचिएका फोटोहरूको उदाहरण
7.1 क्यामेरा अनुप्रयोग
8 शक्तिशाली ब्याट्री र अतिरिक्त स्वतन्त्रता
9 सुरक्षा र जडान
10 विशिष्टता तालिका
11 फाइदा र बेफाइदा
11.5 Gshopper बारे
12 सम्पादकको विचार
POCO, जटिल बिना फर्म
२०१ 2018 मा त्यो सुरूवात गरेदेखि, फर्म विकसित भएको छरेडमीले गरे जस्तो, शाओमीबाट आधिकारिक रूपमा एक "स्वतन्त्र" ब्रान्डको रूपमा अलग भयो। र फेमको साथ जुन फर्मको अघि हो कि यसको पहिलो उपकरणले बजारलाई हल्लायो र यस तथ्यले प्रदान गरेको सुरक्षाले अर्को महान उपकरण आइपुग्छ, पोको एम।।
पोको एक्स3को विस्फोटक प्रक्षेपण पछि जुन यस फर्मले बजारको उच्च क्षेत्रमा अनुयायीहरूलाई स्क्र्याच गर्न मद्दत गरेको छ। M3 को साथ, सानोमा मध्य दायरा पाईको राम्रो टुक्रा प्राप्त गर्ने दृढ इरादा छ। हामी जहिले पनि भन्छौं, सूत्र यो सजिलो छ जति यो प्राप्त गर्न गाह्रो छ: राम्रो मूल्यमा राम्रो उत्पादन.
पोको M3 छ एक सही सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन्न भनिन्छ २०२१ को बखत। बजारमा केवल चार महिना भन्दा कमको साथ धेरै अवसरहरूमा उपलब्ध को स्टक निकासको प्रबन्धित छ बिक्री को सबै रास्ते मा। पक्कै पनि यो स्पष्ट संकेत हो व्यापक बिक्री हो र यो आउने महिनाहरूमा त्यसो गर्न जारी राख्न सक्छ। यदि यो स्मार्टफोन तपाईले खोज्नु भएको कुरा मात्र हो भने, अब तपाई आफ्नो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ LITTLE M3 Gshopper मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य।
पोको M3 अनबक्स गर्दै
जस्तो कि हामी जहिले गर्न चाहन्छौं, यो हो बक्स खोल्नको लागि समय र हामी भित्र फेला सबै कुरा जाँच गर्नुहोस्। सामान्य जस्तो, हामी फेला पार्दैनौं कुनै आश्चर्य छैन न त कुनै त्यस्तो चीज। तर त्यसो भनिएपछि, हामीसँग एलिमेन्टहरू छन् जुन धेरैले छोड्न थाल्छ र केहि अन्य महत्त्वपूर्ण अतिरिक्तहरू जुन हामी सँधै कदर गर्छौं।
हामीले उपकरण आफैं भेट्टायौं, जुन हामीले भनेजस्तै ठूलो ब्याट्री छ, सानो ब्याट्रीको साथ धेरै अन्य फोनहरू भन्दा कम भारी। हामी पनि फेला पार्दछौं डाटा केबल र लोड, ढाँचाको साथ यस अवस्थामा USB प्रकार सी। र पावर चार्जर, केहि उत्पादकहरूको लागि उपरान्त आवश्यक छैन।
हामीसँग एक महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त छ एक लचिलो सिलिकॉन आस्तीन फोन संग एक पन्जा जस्तै फिट। हामीसँग सुरुबाट नै नयाँ स्मार्टफोनको लागि आवश्यक पर्ने पहिलो सहयोगी हुनु यो एक विस्तार हो। अन्यथा, द्रुत सुरु मार्गनिर्देशन र क्लासिक्स वारेन्टी सम्बन्धित कागजात.
को साथीहरुलाई धन्यवाद @ Gshopper_USA हामी शानदार POCO M3 परीक्षण गर्दैछौं। यहाँ हामी तपाइँलाई अलि अनबक्सि leave्ग राख्छौं। # समीक्षा पूर्वावलोकन pic.twitter.com/oZ4CdtDzl9
- Androidsis (@ androidsis) अप्रिल 4, 2021
यो पोको M3 हो
एन्ड्रोइडिसमा हामी सधैं बाहिर खडा हुन्छौं सद्गुण मौलिकताको रूपमा र कुनै पनि उपकरणको डिजाइनमा हिम्मत। अहिले आफैंलाई बाँकी भन्दा फरक पार्न पक्कै गाह्रो छ। तर पर्याप्त मनसायले यो उत्पादन सिर्जना गर्न सम्भव छ जुन अरू जस्तो छैन। पोको M3 फरक छ र त्यो सकारात्मक र धेरै सराहना गरिएको कुरा हो।
पहिलो कुरा ध्यान आकर्षित गर्दछ शारीरिक पक्ष Poco M3 जब यसलाई तपाईंको हातमा समात्दै छ उनको पछाडि। बाटो एक ट्रिपल क्यामेरा मोड्युल, जसको बारेमा हामी पछि विस्तारमा कुरा गर्ने छौं, यो माथिल्लो भागमा एकीकृत छ सबैभन्दा कम उल्लेखनीय छ। महान विभिन्न रंगको साथ आयत र बिभिन्न सामग्री जुन यसको माथिल्लो भागमा तेर्सो रूपमा अवस्थित हुन्छ। तपाईंलाई यो अधिक वा कम मनपर्न सक्छ, तर यो मूल हो र यो राम्रो देखिन्छ।
पछाडि पनि हामीले प्रयोग गरिएको सामग्री हाइलाइट गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ कि प्लास्टिकको छनोट एक सफलता हो। एक रफ फिनिस जुन गैर पर्ची हो, Poco M3 स्पर्श गर्न धेरै रमाईलो छ। IMHO, धेरै चमकदार पीठ भन्दा राम्रो पॉलिश समाप्त संग प्रिन्ट को एक swatch हुन समाप्त।
यहाँ POCO M3 खरीद गर्नुहोस् १%% छुट सहित
प्लास्टिक फेसनमा फर्किएको छ, हो, अधिक अप-टु-डेट प्रस्तुतीकरणको साथ र उत्तम-निर्मित मिश्रहरूका साथ। यसका अतिरिक्त पकड मा धेरै प्राप्त, विशेष गरी सिलिकॉन केस बिना, rबम्प र सम्भावित खरोंचहरू धेरै राम्रो हुन्छन्.
मा पार्श्व उही समान बनावट र सामग्रीहरू संरक्षित छन्, र स्क्रिन कुनै किनार वा तीखो किनारहरू गडबडी वा खस्कनको साथ ठीकसँग एकीकृत गर्दछ। पक्षहरूलाई हेरेर हामी हेर्दछौं कि यो कसरी छनौट गरिएको छ फिंगरप्रिन्ट रिडर छेउ A स्थान जुन अन्य निर्माताहरूले स्क्र्यापिंग समाप्त गरे, तर जसको लागि सोनी जस्तै अरूले राम्रो परिणामको साथ शर्त गर्न जारी राख्छन्।
फिंगरप्रिन्ट रिडरको माथि, जुन यसले पनि कार्य गर्दछ गृह बटन यदि हामी प्रेस गर्छौं भने हामी फेला पार्दछौं भोल्यूम नियन्त्रणहरू एक विस्तारित बटनको साथ।
मा माथि हो J.। ज्याक प्लग हेडफोनका लागि। को बाँया पट्टि मात्र छ ट्रे संग स्लट कार्डहरूका लागि। जोड दिनुहोस् कि यो एक हो ट्रिपल ट्रे जसमा हामी एक साथ दुई सिम कार्डहरू र एक माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड घुसाउन सक्छौं। मा तल हामी भेट्छौं, बायाँ देखि दायाँ, लाई माइक्रोफोन, the चार्ज कनेक्टर उपहार ढाँचा USB प्रकार सी, र यो मात्र हो लाउडस्पीकर.
पोको M3 स्क्रीन
यो यस उपकरणको सब भन्दा शक्तिशाली खण्ड हो। पोको एम screen स्क्रिनले बाँकी मिड-रेन्ज मोबाईलहरूबाट अलग देखिनको लागि प्रबन्ध गर्छ। हामीले भेट्टायौं gener..6,53 इन्च आकार भन्दा बढि प्यानलमा आईपीएस प्रस्ताव गर्दै पूर्ण HD प्लस रिजोलुसन र एक संग २60० हर्ट्ज रिफ्रेस दर। फोनमा पत्ता लगाउन केहि गाह्रो जुन समान मूल्य दायरामा अवस्थित छन्।
सामान्य नियमको रूपमा, जब हामी एक सय पचास युरोको मध्य-दायरा उपकरणको खोजी गर्छौं, तब हामी जान्दछौं कि हामीले केहि चीजहरू छोड्नु पर्छ। मुख्य मध्ये एक स्क्रिन हो जुन प्राय सानो हुन्छ र सबै तल्लो रिजोलुसन भन्दा माथि छ। यहाँ M3 को अभिप्रायले stomping आउँछ धेरै धेरै विशिष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव प्रस्ताव गर्नुहोस्, र यदि यो पहिले नै तपाईंलाई विश्वस्त गरिएको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो प्राप्त गर्नुहोस् सबै भन्दा राम्रो मूल्य.
La पक्ष अनुपात :19.5: १। यसको प्यानलको आयाम देखाउँदछ र आरामदायक तरिकामा भिडियो र मल्टिमेडिया सामग्रीको मजा लिन यो आदर्श बनाउँदछ। यो छ २ inch० पिक्सेल प्रति ईन्च घनत्व (dpi) कुनै श doubt्का बिना, एउटा स्क्रिन जसले यसलाई अत्यन्त रमाईलो स्मार्टफोन बनाउँदछ। र यसले फरक पार्नुको साथसाथै यस्तो जटिल क्षेत्रमा यसलाई चमक दिन्छ।
पोको एम screen स्क्रिनसँग एक छ उपकरण अगाडि प्यानल कब्जा% 83% सम्म पुग्छ उही। एक राम्रो सम्बन्ध जुन खालिको प्रकारले ठूलो अंशमा प्राप्त गरिन्छ। हामी संग Cनिंग गोरिल्ला ग्लास3गिलास सुरक्षा स्तरयो सुरक्षाको सबैभन्दा नयाँ मानक होईन, तर यसले यसले केही खण्डहरू र स्क्र्याचहरू राम्रोसँग खडा गर्दछ।
कम से कम अचानक तरीकाले फ्रन्ट क्यामेरा "लुकाउनुहोस्" को समाधानaमार्फत गरिएको छ ड्रप प्रकार निशान। हामी निशानको यस प्रकारको भन्न सक्छौं कि यो फेसनल छ। यद्यपि हामीले पर्दामा तथाकथित प्वालहरू अधिक मन पर्यौं। स्क्रिनमा राख्न सक्ने एउटा कमजोरी त्यो हो यसको चमक बाकीमा छैन र धेरै स्पष्ट अवसरहरूमा हामीलाई स्क्रीन स्पष्टसँग पढ्न गाह्रो भएको थियो।
पोको एम inside भित्र के छ?
हामी पोको एम inside भित्र भित्र बोक्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं। यो हड्तालको स्मार्टफोन किन सुसज्जित छ भनेर बताउने यो समय हो ताकि हामी के प्रस्ताव गर्न सक्षम छौं भनेर एक विचार प्राप्त गर्न सक्दछौं। एम vitamin लाई भिटामाइज गर्न हामीले एक चिप भेट्टायौं जुन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662२। प्रोसेसर रेप्पमी Motor को लागि ओप्पो, मोटोरोला, नोकिया, रियलमी वा आफै शाओमी आफै जस्ता निर्माताहरूले विश्वास गरे।
हामीले एउटा भेट्टायौं A कोर २.० गीगा हर्जमा र अन्य 4. कोर १.2.0 गीगाहर्ट्जमा काम गर्दै ओटा कोर कोर सीपीयू। ग्राफिक्स सेक्सनaद्वारा कभर गरिएको छ GPU को पनि क्वालकॉम, एड्रेनो 610१०। हामी समस्या बिना परिभाषा समस्या बिना र धेरै तीर्थ ग्राफिक्स बिना हाम्रो मनपर्ने खेल को कुनै पनि खेल्न सक्छौं।
पोको एम सँग मेमोरीका दुई संस्करणहरू छन् राम, यस अवसरमा, हामीले परीक्षण गरिरहेका उपकरणहरू छन्4जीबी, जबकि त्यहाँ एक अधिक शक्तिशाली संस्करण छ6जीबी। को क्षमता भण्डारण बाट छ 64 जीबी, र उही तरीकाले, त्यहाँ क्षमता संग एक संस्करण छ 128 जीबी। हामीसँग माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गरेर मेमोरी विस्तार गर्ने सम्भावना पनि छ।
पोको एम's को क्यामेरा
यदि हामीले पहिले टिप्पणी गरेका छौं कि स्क्रिन यसको सब भन्दा एक शक्ति हो, हामी यसको क्यामेराको बारेमा समान भन्न सक्दैनौं। हुनसक्छ हामीसँग धेरै आशा थियो। यद्यपि हामीले सबै समयमा ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि पोको एम the मध्य-दायरासँग सम्बन्धित छ र यसको मूल्य छ जुन सब भन्दा आधारभूत दायराका उपकरणहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
त्योले भन्यो, M3 क्यामेरा खराब काम गरेर समाप्त हुँदैन, तलका रूपमा हामी खिचेका केही फोटोग्राफरहरूको नमूनाहरूको साथ जाँच गर्न सक्छौं। न केवल उसले आफूलाई राम्रोसँग रक्षा गर्दछ, यो पनि धेरै योग्य क्याचहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम एक उच्च स्तरको विवरण र राम्रो रंग जानकारीको साथ। आँखा पक्रने स्थिर क्यामेरा मोड्युल सुविधाहरू एक ट्रिपल लेन्स जहाँ प्रत्येकको आविष्कार हुन्छ र एक राम्रो परिभाषित प्रकार्य।
यसका लागी मुख्य लेन्स सानोमा सेन्सर भएको छ सामसु S S5KGM1 प्रकार Isocellसंकल्प सहित १२ मेगापिक्सल र खोल्दै १.1.79। फोकल. La segunda लेन्सको एक छ २.02 को फोकल अपर्चरको साथ ओम्विभिसन सेन्सर OV10B2.4 प्रकार CMOS। को एक संकल्प छ १२ मेगापिक्सल र ख्याल राख्छ पोर्ट्रेट मोड गहिराइको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न। को तेस्रो लेन्सको एक सेन्सर छ Hynix HI-259 पनि टाइप CMOS, समान फोकल अपर्चरको साथ र उही रिजोलुसनको साथ १२ मेगापिक्सल। यो सेन्सर म्याक्रो विवरण कब्जा गर्न जिम्मेदार छ।
यसका लागी सेल्फी क्यामेरा अगाडि, हामी एक पाउँछौं ओम्निभिसन OV8856 प्रकार CMOS सेन्सर, यस अवस्थामा एक संकल्पको साथ १२ मेगापिक्सल र खोल्दै १.2.0। फोकल। उत्तम क्यामेरा कल र सेल्फि फोटोहरूको लागि उत्तम क्यामेरा।
हामी पुष्टि गर्न सक्छौं, गलत हुन डराउँदैन, जुन पोको एम3छ धेरै सभ्य क्यामेरा सेक्सन। सबै भन्दा माथि, हामीले पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका छौं, यो दायरामा लिने मूल्य दायरालाई ध्यानमा राख्दै। तेसैले यसको धेरै शक्तिशाली पक्षहरूको संयोजन, Poco M3 अपराजेय उपकरण बन्न सक्छ। यदि POCO M3 ले तपाईंलाई पहिले नै विश्वास दिलाएको छ भने, लामो समय सम्म प्रतीक्षा नगर्नुहोस् र यहाँ एक १ discount% छुटको साथ खरीद गर्नुहोस्.
M3 को साथ खिचिएका फोटोहरूको उदाहरण
क्यामेरा कसरी काम गर्दछ भन्ने बारे अझ यथार्थवादी विचार गर्न। हामी यो परीक्षण गर्न बाहिर गएका छौं र यहाँ हामी तपाइँलाई क्याप्चर गरिएको सानो नमूना छोड्छौं।
यस चित्रमा, हामी यसको सबै महिमामा M3 क्यामेरा प्रस्ताव गर्न सक्षम छ के मा प्रशंसा गर्न सक्छौं। कुनै पनि उपकरणको क्यामेराको साथ सामान्य रूपमा हुन्छ, खुला वातावरणमा राम्रो प्राकृतिक प्रकाशको साथ उनीहरूको उत्तम प्रस्ताव राख्नुहोस्। तर यो फोटो मा हामी वास्तव मा सराहना गर्दछौं रंगहरू, लास फाराम अग्रभूमिमा तत्वहरू, जुम इनसमेत।
यो पनि अपरिहार्य छ सब भन्दा टाढा क्षेत्रमा केही हल्ला थाहा हुन थाल्छ र लाइनहरु एक सानो भ्रमित हुन्छन्। केहि चीज जुन फोटोग्राफर एलिमेन्टहरूबाट पनि प्रभावित छ।
यहाँ हामी प्रशंसा गर्न सक्छौं,aमा भित्री फोटो, साथै बिभिन्न रंग र रंगहरू तिनीहरू विश्वासीपूर्वक पुन: उत्पादन गर्छन्। हामी सजिलैसँग याद गर्दछौं बिभिन्न बनावट र तपाइँ पनि एक प्राप्त राम्रो परिभाषा.
यो मा विस्तृत क्याप्चर, यो पनि धेरै प्रस्ट देखिन्छ बनावट र सामग्री मा विवरण। राम्रो परिभाषा राम्रो प्रकाशको लागि धन्यवाद प्राप्त गरियो। निश्चित रूपमा, शार्पनेसको राम्रो स्तर केन्द्रीय वस्तु मा।
यहाँ हामी राख्छौं POCO M3 डिजिटल क्यामेरा जूम। यो ल्यान्डस्केप फोटो हो जुन धेरै ठाउँ लिन्छ, र मोटे तौर मा राम्रो गुणको फोटो हो।
सबै जूम लागू गरिएको साथ, आश्‍चर्यचकित रूपमा, धेरै रिजोलुसन हरायो र पिक्सेल देखा पर्छ। यसले वस्तुहरू नजिक पाउँदछ, तर विकृतिको यो स्तरको साथ फोटो प्रयोग गर्न असम्भव छ।
हामीले सँधै MIUI को आफ्नै क्यामेरा अनुप्रयोग मनपराएका छौं। यद्यपि नेत्रहीनता यो केहि शान्त छ र धेरै राम्रो छैन, अभ्यासमा यो प्रयोग गर्न धेरै सरल र प्रभावी छ। हामी हामीलाई चाहिने सबै सेटि findहरू र अनुकूलनयोग्य सेटिंग्सको साथ अधिक उन्नतहरूको लागि केही अतिरिक्तहरू पनि फेला पार्दछौं।
हामी संग छ विभिन्न फोटोग्राफी मोड जुन मध्ये पोर्ट्रेट मोड साँच्चै राम्रो कब्जा लिन सक्षम छ बाहिर खडा। दिमागमा राख्नको लागि एउटा विस्तार हो यदि हामी क्यामेरा यसको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारहरू बाहिर ल्याउन चाहन्छौं भने र फोटोहरू हामीसँग हुनु पर्ने अधिकतम गुणस्तर प्राप्त गर्दछ मैन्युअल्ली MP 48 एमपी विकल्प छान्नुहोस्.
यसका लागी भिडियोहरू हामी संग छ समय-चिसो र साथ ढिलो गति। दुबै विकल्पले राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ। हामीसँग गर्न पनि सम्भावित छ पानोरामिक फोटोहरू वा एक तरिका स्क्यान कागजातहरू.
के हामी टिप्पणी गर्न रोक्न सक्दैनौं त्यो क्यामेरा हो फोटोहरूको प्रशोधन गर्दा यसले हामीलाई केही सुस्त बनायो। एउटा क्याप्चर र अर्को बीचमा यो देखिन्छ कि सेन्सर फेरि उपलब्ध हुन फोनलाई केहि सेकेन्ड चाहिन्छ। यस्तो देखिन्छ भविष्यमा अद्यावधिकहरूमा सफ्टवेयरमा आधारित तपाइँलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्नुहोस्.
शक्तिशाली ब्याट्री र अतिरिक्त स्वतन्त्रता
यहाँ पोकोका निर्माताहरूले एक पटक फेरि M3 लाई बाँकीबाट अलग राख्न मद्दत गरे। ब्याट्री हाम्रो उपकरणहरु भएको छ लगभग सधैं कमजोर पोइन्ट। यो सामान्य छ कि यति धेरै सेन्सरहरू, ठूला स्क्रीनहरू, र लामो प्रयोगको साथ, वर्तमान उपकरणहरूको स्वायत्तता स्थिर भएको छ।
पोको एम ले दुई अवरोधहरू तोड्न सफल भएको छ ब्याट्री र स्वायत्तता सेक्सनमा। यस्तो देखिन्छ कि ब्याट्री चार्जको मामलामा स्मार्टफोनको काल्पनिक टोपी थियो र त्यहाँ त्यस्तो टर्मिनलहरू छैनन् जुन यति धेरै चार्ज हुन्छ।
पोको M3 सुविधाहरू एक अविश्वसनीय 6.000 mAh ब्याट्री। र साथै, संगै एक स्वायत्तता जुन दुई पूर्ण दिन अवधिको पार गर्दछ। धेरै समय देखि हामीले फोनमा राम्रो ब्याट्री चार्ज भएको देख्यौं जुन यस अवधिमा सिधा आंशिक हुँदैन। तपाईले याद गर्नुभयो राम्रो काम ऊर्जा दक्षता अधिकतम गर्न यसको विशाल ब्याट्री तान्न।
यो ध्यान दिनुहोस्, विशेष गरी जब हामी ठूलो ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्छौं यसले उपकरण भारी छ कि छैन असर गर्दैन, न त यसको अत्यधिक मोटाई छ। सबै खाताहरूबाट यो अर्थमा यो सामान्य हो। तर अब सम्झनुहोस्, दुई भन्दा बढी पूर्ण दिनको लागि स्वायत्तता संग!
ब्याट्रीको पक्षमा अर्को कुरा यो हो द्रुत चार्जिंग छ। चाखलाग्दो विवरण जुन हामीलाई अपेक्षित भन्दा कम समयमा हाम्रो ब्याट्रीको १००% लिन अनुमति दिनेछ। विशेष गरी त्यो विचार गर्दै पोकोले छिटो चार्ज चार्जर पनि समावेश गर्दछ M3 को बक्समा।
सुरक्षा र जडान
यस खण्डमा हामीले कुरा गर्नु पर्छ फिंगरप्रिन्ट रिडर। हामीले सुरूमा उल्लेख गरेझैं के पहिले स्थानमा बाहिर खडा हुन्छ त्यो यसको स्थान हो। हामीले एक तर्फ फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ उपकरणहरू परीक्षण गरेका छौं र हामीले देख्यौं कि यसले कसरी सधैं काम गर्दैन। शुद्धता र आकारको यहाँ धेरै चीजहरू छन्, र हामीले यो पहिचान गर्नुपर्दछ कि यो केस प्रभावकारी भएको छ.
अतिरिक्त सुरक्षाको रूपमा, POCO M3 ले अनुहार पहिचान मार्फत अनलक गर्न अगाडि क्यामेरा प्रयोगको सम्भावना पनि समाहित गर्दछ। हामीले केहि उपकरणहरू पनि परीक्षण गरेका छौं जुन अनुहारको अनुहार अनलकमा बढेको छ र कार्यक्षमतामा रहँदै आएको छ यो भन्दा धेरै अगाडि।
जडानको लागि हामी फेला पार्दछौं ब्लूटूथ 5.0। तर हामीले दुबैको बारेमा कुरा गर्नुपर्‍यो महान अनुपस्थिति; NFC र 5G। यो सामान्य छ कि यस मूल्य दायरामा उपकरणसँग G जी छैन, तर एनएफसी नभएकोले यसको सम्भावनाहरू थोरै सीमित गर्दछ। उल्लेखनीय सफल Xiaomi द्वारा सफल अनुकूलन तह को कार्यान्वयन हो MIUI यसको संस्करण १२ मा। केहि चीज जसले उपकरण दिन्छ धेरै राम्रो उपस्थिति, तर यो लाग्छ प्राकृतिक रूपमा प्रवाह समाप्त नगर्नुहोस् सामान्य भन्दा
स्क्रिन .6.53..XNUMX पूर्ण HD +
स्क्रीन ढाँचा 19.5: 9
पर्दा रिजोल्युसन 1080 X 2340 px - पूर्ण HD +
स्क्रीन घनत्व 395 ppp
ताजा दर 60 हर्ट्ज
र्याम मेमोरी4जीबी
भण्डारण 128 जीबी
विस्तार योग्य मेमोरी माइक्रो एसडी
प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 662
CPU अक्टा-कोर xx क्रिओ २4० २.० गीगाहर्ट्झ + xx क्रिओ २ 260.० १.2.0 गीगा हर्ज
GPU क्वालकॉम एड्रेनो 610०
रियर क्यामेरा ट्रिपल सेन्सर + 48 + २ + २ Mpx
मुख्य सेन्सर 48 Mpx
दोस्रो पोर्ट्रेट मोड सेन्सर2Mpx
म्याक्रो मोड सेन्सर2Mpx
सेल्फी क्यामेरा 8 Mpx
Flash डुअल एलईडी
ओप्टिकल जूम NO
डिजिटल जूम SI
रेडियो एफएम Si
ब्याट्री 5000 mAh
द्रुत चार्ज SI
ताररहित चार्ज गर्दै NO
वजन 198 g
आयामहरू 76.8 एक्स 166.0 एक्स 9.3
मूल्य 169.99 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् सानो M3
यो समय बताउने हो, व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट, हामीलाई पोोको एम what को बारेमा के मनपर्‍यो र अझ राम्रा चीजहरूको लागि अझै ठाउँहरू छन्। यो सबै जब यो दोहोर्याएर कि हामी कुरा गरिरहेको छौं कि दिमागमा राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ एक मध्यम-दायरा उपकरण जो मुश्किलले € १€० भन्दा बढी छ र धेरै दुर्लभ सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
La स्क्रिन निस्सन्देह पोको एम of को महान पात्रहरू मध्ये एक हो। उसको हाइलाइटहरू रिजोलुसन, आकार .6.53..60 र H० हर्ट्ज।
La 6000००० mAh ब्याट्री र अविश्वसनीय स्वायत्तता कि प्रस्तावहरु दुई दिन भन्दा बढिको प्रयोग.
El मूल्य पोको एम ले स्मार्टफोनमा निर्णय गर्न सजिलो बनाउँदछ जब तपाईंसँग सीमित बजेट हुन्छ, यसको कुनै प्रतिस्पर्धा हुँदैन।
El डिजाइन यस उपकरणको पनि "पेशेवरहरू" बीच हुन योग्य छ। किनभने प्लास्टिक कसरी राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ उत्पादन बिना निकै गुणस्तरको, यसको विपरित।
एक अनुपस्थिति जुन हामीले महत्त्वपूर्ण ठान्छौं, पोको एम। NFC छैन, केहि जुन हामीले छुटायौं।
La फोटो क्यामेरा अनुप्रयोग यो बाँकी मापन गर्दैन जब यो चालु गतिमा आउँदछ। फोटोहरू लिदा हामीले छविहरूको प्रशोधनमा एक सानो लाख देख्यौं।
El स्क्रिनको चमक उज्यालो अवस्थाहरूमा स्क्र्याच गर्नका लागि होईन।
हामी G जी मिस गर्दछौं, जस्तो कि हामी कुनै पनि भर्खरको स्मार्टफोनको बारेमा भन्न सक्दछौं, तर फेरि हामीलाई थाहा हुन्छ हामी कुन मूल्य दायरामा छौं।
यो समीक्षाको लागि हाम्रा सहयोगीहरू, Gshopper, तिनीहरू आउँछन् एक धेरै महत्त्वपूर्ण पूंजी समर्थनको साथ वाणिज्यिक ग्राहकहरूको लागि विश्वको पहिलो इलेक्ट्रोनिक आयातकर्ता र एक विश्वव्यापी क्रस-सीमा ई-कमर्स प्लेटफर्म ग्लोबल खरीददारहरूको लागि। बग डाटा खनन टेक्नोलोजीलाई धन्यवाद, उनीहरूले विश्वका सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू राम्रा सम्भावित मूल्यमा मार्केट गर्न पत्ता लगाउँदछन्।
यो मिशन हो सबै देशहरूबाट सबै भन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू कुनै पनि स्थानीय खरीददारमा पुग्न। संग ११ बर्षको अनुभव टेक्नोलोजी र ग्लोबल डीएनए मा। का साथ हस्ताक्षर सिंगापुर आधारित छ के भेटियो पूर्ण विस्तारमा र त्यो वर्तमान मा १ countries देशहरु मा एक उपस्थिति छ।
को समीक्षा: राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस
मा पोष्ट गरिएको: 8 अप्रिल 2021
अन्तिम संशोधन: 11 अप्रिल 2021
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » हाम्रो बारेमा » समीक्षा » Xiaomi POCO M3 विश्लेषण: के यो यसको स्पेसिफिकेसनको साथ यसको लायक हो?
तपाईंको पीसीमा तपाईंको मोबाइल हेर्न PC नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू
त्यागी - परम संग्रह New नयाँ खेल मोड र अधिकको साथ अपडेट भयो